Xiriirinta Xiriirinta iyo Tilmaamaha Xidhiidhka khabiirka caanka ah Ivan Konovalov
Lifaaqa Lifaaqa: Ivan Konovalov waa macaamilka guusha ee macaamiisha ee Semalt. Shirkadu waxay leedahay in ka badan 10 000 macaamiil guulaystay waxayna markasta horay ugu sii socotaa tiknoolajiyada ugu fiican.
Raadinta mashiinka ayaa shaqo fiican u leh boggaga internetka ee sareeya kuwaas oo ah qiime weyn oo ay u leedahay baaritaanka raadinta booqdaha.
Mashiinka raadinta wuxuu u soo diri karaa inta ugu badan 60 boqolkiiba baabuurta bilaashka ah goobtaada, ma jirto sabab aan ku dhisi karin isku xidhka boggaaga kuna raaxeysta qaybtan weyn ee bilaash ah gaadiidka.
Mawduuca dhismaha isku xirku waa mid aad u ballaaran, waxaadna baran doontaa wakhti iyo inta aad tijaabinaysid tijaabada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira macluumaad qaar ka mid ah oo lagama maarmaan u ah inaad baratid si aad u bilowdo oo aad uga fogaato caqabadaha ugu caansan.
Sababta Sababta Isku-dhiska Dhisku waa Muhiim
Haddii aad rabto inaad hesho wax la mid ah qaboojiyaha, maxaad ku sameyn lahayd dhacdadan oo kale?
Waxaa laga yaabaa in aad hesho dukaanka meesha aad ka iibsan kartid alaabta, ha noqoto mid ganacsi ama ganacsato online ah.
Suurtagalnimada inaad u socoto dukaanka oo aad iibsato qaboojiye adiga oo aan cidna weydiisan taladooda waa marka aad ogtahay sida loo go'aamiyo go'aanka.
Waxaad dooran doontaa ikhtiyaarka ku saleysan waayo-aragnimadaada, doorbidkaaga, ama laga yaabo inaad soo jeediso saaxiib ama xubin qoys. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad iibsaneyso qaboojiye markii ugu horeysay ee noloshaada, oo aad rabto inaad sameyso go'aan ku salaysan, maxaad sameyn laheyd? Inta badan, waxaad raadin doontaa qaar ka mid ah talo-bixinta qof aqoon u leh iibsashada qaboojiye. Waxaad ku kalsoon tahay go'aanka qofka oo aad ku guuri doonto iibsashada, sax?
Webka Wideen ee Weyn waa meel weyn. Marka mashiinnada raadinta ay tahay inay ka jawaabaan su'aalaha booqdaha, waxay eegaan shabakada natiijooyinka isudheellada. Maadaama ay jiraan shabakado badan oo bixiya macluumaad isku mid ah, way adag tahay mashiinnada raadinta si ay uxusaan goobaha ugu fiican si loo helo natiijooyinka raadinta. Xaaladahan oo kale, xiriirinta xiriirka.
Aynu sheegno inaad leedahay bog internet ah oo aad ku bixiso adeegyo ku saabsan tikidhada tigidhka iyo hudheelada hudheelada kala duwan ee wadankaaga. Hadda, haddii aad leedahay xiriiro soo gelaya goobtaada qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ama huteelada, waxay si weyn uga faa'iideysan doontaa boggaaga internetka waxayna kaa caawineysaa inaad hesho dhibco ka sarreeya SERPs (Search Results Results Pages) marka la barbardhigo goobo kale oo la mid ah adiga. Xidhiidhka ayaa u dhigma kalsoonida..
Marka laba goobood ay isku mid yihiin mawduucyada, kan hela darajada sare waa goobta dhisaysay kalsoonida ugu badan mashiinnada raadinta .
Markaad adigu abuurto shabakado kale, waxaad wadaageysaa waayo-aragnimo oo isku kalsoonow midba midka kale mawduucaaga. Raadinta makiinada xiriirka jacaylka.
Xiriirrada Ku Dhaca iyo La Socda
Xidhiidhada soo socda ayaa ah kuwa isku xira boggaga internetka, halka xidhiidhada ka baxsan ay tixraacaan kuwa soo booqda boggaga internetka oo kale.
Xiriirrada soo socda ayaa muujinaya inta websaydhka kale ee adiga kugu kalsoon tahay iyo xidhiidhada la soo gudbiyey waxay muujinayaan inta aad kalsooni ku qabtid goobta kale .
Tayada marwalba muhiim ayey u tahay bani-aadmiga, waana sidoo kale waxyaallaha makiinada raadiyuhu ay qiimeeyaan.
Ujeedadoodu waa inay soo bandhigaan natiijooyinka ugu muhiimsan iyo muhiimka ah ee su'aalaha isticmaalaha marka la jarayo cawska ama garabka midigta ee farabadan.
Taas macnaheedu waa inay hubiyaan inaad natiijooyinka saxda ah ka helayso meelo sax ah mar walba.
Waa maxay tayada xiriirka?
Tani waa arrin muhiim u ah oo ka caawiya makiinadaha raadinta raadinaya tayada iyo kalsoonida bogga.
Markaad dhiseyso isku-xidhka boggaaga, waxaa muhiim ah inay ka yimaadaan aaminaad leh iyo xarumo tayo sare leh .
Maaddaama ay jiraan bogag aan dhammeystiran oo ku saabsan mawduuc la siiyay boggaaga internetka si aad ula xiriirto oo aad u hesho xiriiro, oo ugu dambeynna aad u heshid darajo sarreeya bogagga natiijooyinka raadinta, waa mid muhiim ah in xiriiradaasi ay ka socdaan goobaha ugu sareeya qaybta.
Xidhiidhyada kala duwan ka yimid goobo tayadoodu sarayso waa calaamad ah in website-yadaasi ay ku aamminsan yihiin adiga iyo xiriirooyinkan soo socda waxay u sheegaan matoorada raadinta in website-kaagu uu sidoo kale leeyahay wax faa'iido leh macaamilka inuu eego.
Tani waa nooca talo soo jeedinta ah ee aad raadsan lahayd markaad iibsanayso qaboojiye, sida kor ku xusan.
Kaliya waxaad ku qiimaysaa talooyin ku saabsan mawduuc shakhsi ahaaneed qof awood u leh mawduuc gaar ah Source .
Xiriirada soo-galaya ee tayo sare leh oo aad awood u leedahay in aad u tagto goobtaada, qiimeyntaada ka sii wanaagsan ayaa noqon doonta!